Isikhungo Sokubheja Kwezemidlalo - Messina
Ukuphikisana okuhle kakhulu ngokubheja kwakho kwansuku zonke
Isikhungo di ukubheja, isekelwe ngaphakathi Messina, inikeza izinsiza ezahlukahlukene ezinikezelwe umdlalo on line e ukubheja emicimbini yezemidlalo kanye neminye imidlalo. Esethu ukubheja isikhungo futhi ihlome ngokuphelele Iphuzu le-Intanethi, enamadivayisi anamuhla kakhulu futhi isebenza njengesikhungo izihloko zocingo, futhi ukuvumela i yokukhokha di izincwadi zezindaba.
Isikhungo Sokubheja Kwezemidlalo: zama inhlanhla yakho eMessina
Konke 'Isikhungo di ukubheja uzothola ithuba lokusebenzisa isikhathi sakho samahhala uzama inhlanhla yakho. Lapha ungakwazi ukubheja Ukucaphuna ngayinye ukubheja ngemicimbi yazo zonke izinhlobo. Amakhasimende akhetha okwethu ukubheja isikhungo bayazi ukuthi bangathembela eqenjini elilungiselelwe, elisheshayo futhi elisheshayo futhi ngokuvuselelwa emicimbini ethakazelisa kakhulu futhi esezenzakalweni ezixakile zamanje. Ehhovisi lethu, uzothola nekhona Iphuzu le-Intanethi, Schermi ukuthi ulandele kuphi imidlalo di football neminye imicimbi imidlalo bukhoma.
Ukubheja bukhoma kuyo yonke imidlalo yokuncintisana nemicimbi ethile
Al Isikhungo Sokubheja imicimbi ebaluleke kakhulu yezemidlalo ikhethwa nsuku zonke: Imidlalo yendebe, imidlalo uphawu lokusayina ebhola, ibhola lombhoxo, volleyball, amaqembu entwasahlobo Ngaphandle kwalokho izinhlanga zemoto e isithuthuthu, kuzohlolwa futhi kuphakanyiswe ngokukhethwa ngokucophelela kwe Ukucaphuna ezahlukene ngomcimbi ngamunye. Uma futhi ufuna ngisho lokho kudlula ukucula imincintiswano yezemidlalo, njengokunqoba komncintiswano yiqembu noma ukukhethwa komqeqeshi omusha, ei-ejensi di ukubheja uzothola nezinketho zomdlalo kulokhu isigaba di imicimbi.
Izingcingo Eziphezulu Nezinkokhelo Zezingcingo
Esikhungweni ukubheja a Messina ungasebenzisa ngokunenzuzo insizakalo elula yokukhokha ngoba i izincwadi zezindaba, inkonzo ye izihloko zocingo e Ukubhaliswa kwe-TV. Bonke abaqhubi beselula abathandwa kakhulu abakhona IVodafone, Isikhathi, 3 e Wind ngaphezu kokubhaliselwe I-SKY, DAZN, i-Infinity e ama-recharges ukuthenga kwakho oku-inthanethi kwe I-Amazon, iNintendo e I-Microsoft Ungayikhetha indlela yokukhokha oyithandayo, ngaso sonke isikhathi ngaphansi kokuqashwa kwabasebenzi bethu abazokulandela igxathu negxathu kokuthengiselana ngakunye.
Imeshi ebukhoma nemicimbi esikhungweni sokubheja eMessina
le ukubheja ama-regars azolandela imidlalo noma imicimbi ebaluleke kakhulu losuku kwelakithi ukubheja isikhungo: ngiyabonga enkonzweni Ibhizinisi Lasemkhathini, ungabuka okwakho kuphila imidlalo di football o imijaho yezimoto, qhathanisa neyakho ukubheja senziwe nje. Kuphela okuhle kakhulu Ukucaphuna futhi okuhle kakhulu nezinsizakalo zokugembula ezisemthethweni ukuqinisekisa ukungafihli ngokuphelele nokungakhethi Nelle ukubheja nsuku zonke.